Q & A – စာမကျြနှာ 8 – Healthy Life Journal
တစ်နှစ်ကျော်အရွယ် နွားနို့တိုက်လို့ရလား …
———၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊———- Q. သမီးလေးက တစ်နှစ်ကျော်ရှိပါပြီ။ မိခင်နို့ကို ပြည့်ပြည့်၀၀မတိုက်ခဲ့ရပါဘူး။ ထမင်းလည်း သိပ်မစားပါဘူး။ အခု နွားနို့တိုက်လို့ရပါပြီလား။ A. တစ်နှစ်ကျော်လာပြီဆိုရင် နွားနို့တိုက်လို့ရပါတယ်။ အနည်းဆုံး နွားနို့ ၅၀၀ CC တိုက်လို့ရပါတယ်။...
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. HIV မှာ Not detected ပြရင် အကာအကွယ်မဲ့ ယောင်္ကျားမိန်းမ အတူနေရင် HIV Virus မကူးဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားခင်ဗျ။ A. မကူးဘူးဆိုတာထက် ကူးစက်မှုနှုန်း အလွန့်အလွန်လျော့နည်းတယ်လို့...
—–၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ယောက်က ရင်သွေးကို ချောချောမောမော မွေးဖွားနိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါသလား။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာ့အတွေ့အကြုံလေးရှိရင်လည်း သိပါရစေ။ A. ကလေးတစ်ယောက် တဖြည်းဖြည်း ကြီးပြင်းလာပြီး အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ဘ၀အဖော်ဆိုတာ လိုအပ်လာပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့တစ်သက်လုံး...
—–၊ ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. အရက်နဲ့ ဘီယာသောက်တာမှာ ဘယ်အရာက အသည်းကို ပိုမိုထိခိုက်စေပါသလဲ ဆရာ။ A. အရက်က အရက်ပဲ။ အတူတူပဲ။ ၀ိုင်သောက်မလား၊ ထန်းရည်သောက်မလား၊ ၀ီစကီသောက်မလား၊ ရမ်သောက်မလား ....
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. တချို့ စားသောက်ကုန်တွေမှာ ကြာရှည်ခံအောင် formalin ဆေး အသုံးပြုကြတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ အဲဒီဆေးဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အလွန်များတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်သိချင်တာက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပြီး တခြားအသုံးပြုလို့ရမယ့် ကြာရှည်ခံဆေး ဥပမာ...
ဓာတ်စာအကြောင်း သိချင်လို့ပါ . . .
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. အခုအခါ ဈေးကွက်အတွင်း ကြော်ငြာကောင်းကောင်းနဲ့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံ (အထူးသဖြင့် ထိုင်ဝမ်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်)က ဈေးကြီးစွာနဲ့ ဓာတ်စာဆိုတဲ့ ဆေးဝါးတွေ လိုက်လံရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီဓာတ်စာဆေးဝါးတွေက FDA ခွင့်ပြုချက်နဲ့...
မျက်စိရောဂါများကို သန္ဓေသားအချင်းဖြင့် အစားထိုးကုသခြင်း
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မျက်ကြည်လွှာမရခင်မှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ သန္ဓေသားအချင်း အစားထိုးတဲ့နည်း (Aminotic Membrane) ကကော တုန့်ပြန်မှုဖြစ်တာမျိုး ရှိပါသလား ဆရာ။ A. ပင်မဆဲလ် (Stem...
မွေးရာပါအရိုးပါးရောဂါအကြောင်း (Osteogenesis Imperfecta)
—၊ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မွေးရာပါအရိုးပါးရောဂါအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ A. မွေးရာပါ အရိုးပါးရောဂါဖြစ်ရင် အရိုးတွေက အလွယ်တကူကျိုးလွယ်ပါတယ်။ မကြာခဏ ကျိုးတတ်ပါတယ်။ မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တတ်ပြီး ကလေးဦးရေ ငါးသောင်းမွေးရင် တစ်ဦးမှာ...
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— Q. ဆရာရှင့် လေယာဉ်စီးတိုင်း နားကိုက်တတ်ပါတယ်။ အရင်ကဆို ပိုဆိုးပါတယ်။ စစီးပြီး သိပ်မကြာခင် နားအတွင်းထဲက ကိုက်ပါတယ်။ နားထဲ နားကြပ်ထည့်ထားပြီး သီချင်းနားထောင်ရင် နည်းနည်းသက်သာသလို ခံစားရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းတော့ လေယာဉ်ဆင်းတဲ့အချိန်ဆို အရမ်းကိုက်ပါတယ်။...